Ubre - BIM MEP Ọkachamara - Geofumadas
Lomalọma - BIM MEP Expert
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke imepụta electromechanical, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi nhazi usoro na usoro ya dị iche iche nke imewe, nyocha na ịpụta nsonaazụ maka usoro ndị ọzọ nke usoro ahụ.
Mee ikike maka imepụta, nyocha, na nhazi nke pipụ, eletriki, na electromechanical (HVAC). Usoro a gụnyere mmụta nke Revit, sọftụwia eji mee ihe na ngalaba nke ihe nrụpụta BIM; yana iji ngwaọrụ nke ejiri ozi a na-arụkọ ọrụ na usoro ndị ọzọ dị ka NavisWorks. Na mgbakwunye, ọ gụnyere usoro echiche maka ịghọta usoro njikwa akụrụngwa niile n'okpuru usoro BIM.
Enwere ike iwere ihe nkuzi n’adabereghị, na-anata diplọma maka usoro agụmakwụkwọ ọ bụla manaBIM MEP Ọkachamara ọkachamara»Na-enyefe naanị mgbe onye ọrụ ewerela usoro ọmụmụ niile na njem.
Uru nke itinye n'ọrụ na ọnụahịa nke diplọma - ọkachamara BIM MEP
MEP - sistemụ ọkpọkọ ……. USD 130.00 24.99
MEP - sistemụ eletriki ……… .. USD 130.00 24.99
MEP - Sistemụ HVAC …………………. USD 130.00 24.99
Usoro BIM ………………………… .. USD 130.00 24.99
Onye nchoputa Nastran ………………………… .. USD 130.00 24.99
Previous Post«Previous BIM 4D nkuzi - iji Navisworks
Next Post Revit MEP Course - HVAC Mechanical nrụnyeNext »